Sidee inuu ka soo kabsado Xiriirada masaxay on Android
Dhammaan xiriirada aan telefoonka Android kaliya tageen. Waxaan si qalad ah dib aan phone in goobaha warshad. Sidee inuu ka soo kabsado, kuwaas oo xiriir lumay aan telefoonka Android? Walba oo soo jeedinaya in si buuxda loo mahadnaqayo doonaa. Thanks! - James
Ma doonaysaa inay ka soo kabsadaan xiriirada tirtiray ka Android phone? Waan ogahay sida ay u dareensan sida dib marka la tirtiro xiriir muhiim ah qalad ah. Nasiib wanaag, in aad soo kabsado tirtiri karaa xiriir taleefanada Android la software kabashada xiriirada android ah - Wondershare Dr.Fone for Android (kabashada xogta Android) (software desktop). Currently, Anigu ma kala kulantay app kasta Android inay awoodaan inay u sameeyaan dib u soo kabashada. Si aad u soo kabsado xiriirada tirtiray ka phone Android, aad leedahay waa inaad:
1) Jooji isticmaalka telefoonka aad Android isla markiiba, sababtoo ah waa khatar u cuudka oo dhammu xiriir haddii aad sii isticmaalkiisa. Xiriirada tirtiray weli ka jiraan ee aad taleefan Android meel laakiin aan la arki karin, oo sugaya in la tirtiro xogta cusub. Xaaladdan oo kale, sii isticmaalaya telefoonka ay abuuri doonaan xogta cusub, taas oo ka dhalatay ka dhigo mid xiriir la tirtiro weligiis doono.
2) Ku rakib Wondershare Dr.Fone for Android on your computer iyo Raac tallaabooyinka hoose si ay u soo kabtaan xiriirada lumay qalabka android aad.
Dadka qaar ayaa la weydiiyay hadii software this waa awoodaa inuu ka soo kabsado xiriirada ka screen jebiyey telefoonada Android ama aan. Sure, qalab this kabashada xiriirada Android awoodo si aad u hesho dhammaan dadka ay khuseyso, labadaba kuwa tirtiray iyo undeleted telefoonka aad Android, oo iyaga u dhoofiyaan si aad u computer sida VCF elekterikal, CSV, ama file HTML. Later, waxaad kartaa in telefoonka aad Android dajiyaan .VCF .
Tutorial Sidee inuu ka soo kabsado Xiriirada tirtiray on Android Phone
Tallaabada 1 Connect qalab Android si aad u computer ah
Download barnaamijka oo ku xidh on your computer. Connect telefoonka aad Android la your computer. Orod barnaamijka iyo waxaad heli doontaa suuqa kala of software sida shaashada ka.
Tallaabada 2 sahlo debugging USB on Android Phone
Si aad u isticmaasho software inuu ka soo kabsado xiriirada tirtiray ka phone android, waa inaad marka hore awood debugging USB ah ee aad taleefan. Ha welwelin! Waa mid aad u fudud in ay awood u debugging USB. Haddii aadan aqoon sida loo sameeyo, kaliya Raac tallaabooyinka hoose sida ay version ee Android socon telefoonka aad.
1) Android 2.3 ama ka hor, ka jaftaa "Settings"> guji "Codsiyada"> guji "Development"> hubiyo "debugging USB"
2) Android 3.0 in 4.1: jaftaa "Settings"> guji "fursadaha Developer"> hubiyo "debugging USB"
3) Android 4.2 ama cusub, ka jaftaa "Settings"> guji "About Phone"> tuubada "Dhis tirada" dhowr jeer ilaa helo qoraal ah "in aad ka yar tahay hab sameeysa"> Back to "Settings"> guji "Developer fursadaha"> fiirisaa "debugging USB".
Fiiro gaar ah: Marka aad awood debugging USB ah ee aad taleefan ka, waxaad ka jari kartaa telefoonka ama aad telefoon ku xiran. Waxay ku xidhan tahay in aad on. Just aad maskaxda ku hayso, waa in aad telefoon la xiran your computer ka dib markii aad awood debugging USB.
Tallaabada 3 Falanqeeyaan aad telefoon iyo iskaan xiriirada la tirtiro
Guji "Start" in anaylze telefoonka aad Android. Falanqaynta dhameystiri doona in dhowr ilbiriqsi. Dabadiisna, amar ka Request Superuser arbushin doonaa shaashadda ka mid ah qalab aad. Riix ah "U ogolow" badhanka si ay u oggolaadaan. Mararka qaarkood waxaa ka muuqan doonaa dhowr jeer. Just guji "ogolow" ilaa mar dambe ma muuqan. Markaas riix "Start" ee suuqa kala barnaamijka iyo waxay ka bilaabanaysaa dhowr qalab aad hadda.
Tallaabada 4 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan xiriirada tirtiray ka phone Android
Tirtiray Ma aha oo kaliya xidhiidho, laakiin sidoo kale dhammaan xiriirada kuwa haatan qalabka aad gaboobay marsiiyey soo baxay oo soo bandhigay natiijada baaritaan. Waxaad iyaga ku eegaan karo mid ka mid ah oo go'aansato midka aad rabto. Calaameeyey oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya on your computer.
Fiiro gaar ah: xiriirada tirtiray iyo xiriirada jira waxaa lagu soo bandhigaa midabbo kala duwan ee natiijada scan. aad u kala sooci karaa iyada oo la isticmaalayo badhanka dusheeda: bandhigaan waxyaabaha tirtiray oo keliya. Waxaa intaa dheer, waxa kale oo aad soo kaban karto, iyo dib ilaa fariimaha, sawiro iyo video qalabka Android aad jebiyo haddii aad u baahan tahay.
> Resource > Android > Sidee inuu ka soo kabsado Xiriirada tirtiray ka Android Devices